Funda ukuba uyile njani kwaye phi uyilo lwegraphic | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Yonke imihla kuzalwa uqeqesho olunye kwaye omnye uyafa.Ngaba oku kunokwenzeka ukuba kuyilwe? Ukubuyela kwixesha elidlulileyo kunye nokucinga kancinci kunokusizisela iingcinga ezininzi malunga nokuba ubuchule bokuyila buya kuba luncedo kwixa elizayo Kwaye sijonge kuluntu lwanamhlanje kunye nophuhliso lwalo, siqala ukucinga ngezinto ezinkulu.
Utata wandazisa ku utitshala wophando, ukuba nenqanaba elihle ebusheni bakhe kunye nomvuzo omninzi ukuze akwazi ukukhulisa abantwana abaliqela, ngomsebenzi ongekhoyo ngoku, ndibona indlela andixelele ngayo ngokuqaqamba okuthile emehlweni akhe. Kwakukho ixesha apho kwiidolophu ezininzi, i-cinema yayiyeyona nto inomdla kakhulu, kuba i-cinema yayiyiparadesi yabantwana nabantu abatsha. Abantu abaninzi babewonwabela amabali amnandi eparadesi ekude kwaye babala iiyure zokufika kwe-movie entsha.
1 Uyilo lwegraphic kumaxesha amandulo
2 Livela phi igama lekrafikhi?
Uyilo lwegraphic kumaxesha amandulo
Umsebenzi kunye nefilimu yayijongene nokutsala abaphulaphuli kwiseshoni nganye kwaye kuba kwakungekho magcisa aziingcali ekushicileleni, abantu abaziyo ukuzoba bacelwa ukuba benze iiposta. Lo yayingulo msebenzi lo mntu wayenayo, i Iipowusta zepeyinti zeemovie ze cinema.
Lo msebenzi wawubaluleke kakhulu kwaye uxanduva kakhulu ngelo xesha, ukusukela Indoda ipeyinte iipowusta eziphambili ngeveki, kodwa ngokufika nokwandiswa koomatshini bokushicilela, umsebenzi wakhe wayeka ukubaluleka kwaye okwangoku akayonto nje engathi lilitha nje elimele ukudandatheka emehlweni kwale ndoda.
Ndasela ezinye zeziselo zam ndithe cwaka, ndabeka uvelwano lwam emsebenzini, ndazibeka kwindawo endala. ¿Kwaye ukuba uyilo lwaluneentsuku kuphela zokuphila? Makhe sithethe kancinci malunga iingcambu zoyilo lwegraphic ukuze sikwazi ukubona ukuba siyaphi kwimbali kwaye sisaza kugqiba ntoni.
Encwadini ibali libaliswa oko kususela kumaxesha angaphambi kokubhalwa kwembali abantu bajonge iindlela zokubonisa ngokubonakalayo izimvo ababenazo kunye neekhonsepthi kunye nolwazi ngendlela yemizobo, bebefuna ukunika ucwangco kunye nokucaca kulwazi lwabo kwaye njengoko iminyaka ihamba, le mfuno yaneliswa ngababhali kunye namagcisa. Kodwa kwakungekho ngo-1922 ukuba umyili wencwadi ogama lakhe UWillian Addinson Dwiggins wadala igama eliyilo loyilo Ukuchaza imisebenzi eyenziwa ngumntu eyenza unxibelelwano lokuprinta lube ngaphezulu kobungcali.
Livela phi igama lekrafikhi?
Ngo-1928 u-Aldous Huxley wathi kwakucacile ukuba oomatshini bahlala apha.
Izimvo ezinje ngale ziyifezekisile loo nto ekuqaleni kwenkulungwane yama-XNUMX iintshukumo zobugcisa ezihambileyo zavela eYurophuNokuba eJamani isikolo sokuqala sokuyilwa sasekwa kwaye into eyayisakuba luqeqesho nje ngokuthe ngcembe yaba bubugcisa.
Emva koko kwavela uyilo kuyilo loyilo y ngo-1919 uyilo lwegraphic longezwa ezikolweni Zokwakha izakhiwo.
Emva kwexesha uyilo lwavela kwiwebhu kwaye ngokufika kwe-HTML yonke into yaqala, apho kancinci kancinci lo mmandla ubuguquka, izakhono zabantu zaqala ukwanda, ukugqiba ukuvela Umyili wesixhobo eqale ukujongana kuphela ne unxibelelwano olubonakalayo kunye nonxibelelwano lwabasebenzisi.
Esi senzo ngoku siyandiswa ukuphucula ukufikelela komsebenzisi, nangona kunjalo buqu Andiqondi ukuba uyilo lojongano luzakuhlala ixesha elide Kwaye ke ndiza kukunika imikhondo enokusikhokelela kule nto.
Inkqubo yokuncitshiswa koyilo lwe-interface iya kukhokelela kwiinkqubo ezisebenza kakuhle kakhulu kwaye kukuba inkqubo ye-automation efikelela kwi-intanethi kwaye Ukuqinisa isikhokelo sendlela ye-UX kunokuchaphazela indawo yemveliso yokunxibelelanaThatha ithuba lokufunda ngakumbi ngobume be-interface, njengoko ngenye imini kungekude kakhulu, abazukulwana bethu baya kusibuza ukuba ibiyintoni leyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Uyilo lwegraphic, yonke into iqala apha